Ernest Hemingway. Isua 119. Iberibe ọrụ ya | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
De Ernest Hemingway ọ na-aga n'ihu na a ga-ekwukwa na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị ndị na-akọ akụkọ banyere akwụkwọ ụwa nke narị afọ nke iri abụọ. Ndụ dị oke egwu dị ka njedebe ọdachi, ọ dị Onyinye Nobel na 1954. Taa ka m mezuru 119 afọ.
Ma ọ bụrụ na anyị agụghị ya, n'ezie anyị ahụwo ụfọdụ n'ime (ọtụtụ) mmegharị ihe nkiri na e mere nke ọrụ ya dị ka Agadi nwoke na oke osimiri (Mụ na Spencer Tracy na-anọ), Maka onye mgbịrịgba o Buru egbe (ha na Gary Cooper). Ya mere, iji chetara onwe m, ahọrọ m ole na ole iberibe iberibe nke onye nnọchiteanya ya kachasị elu.
1 Ugwu Green nke Africa
2 Agadi nwoke na oke osimiri
3 Maka onye mgbịrịgba
4 Paris bụ nnọkọ oriri na ọ .ụ .ụ
5 Inwe na inwe
7 Buru egbe
Ugwu Green nke Africa
Otu kọntinent na-eto ngwa ngwa ozugbo anyị wakporo ya, ma ụmụ amaala bi na ya, ndị mba ọzọ na-ebibi ya; ha gbutu osisi, kpọọ nkụ mmiri wee gbuo ụmụ anụmanụ. Thewa na-ada mbà nke ịbụ ndị a na-erigbu, n'ihi na a na-ahapụ ụwa na ndị bi n'ime ya ka anyị hapụ ha.
Nwoke agadi ahụ bụ onye na-egbu egbu na onye na-eme ihe ike, na akara miri emi n'azụ olu ya. Ọbara gbara nchara nchara nke anụ ahụ na-acha n’anyanwụ nke anyanwụ na-ewepụta n’oké osimiri nke ebe okpomọkụ dị na ntì ya. Ngwongwo ndị ahụ na-agbadata n'akụkụ ihu ya gbadata, aka ya bukwara oke ihe mgbu kpatara site na-ejide eriri ndị ahụ mgbe ha na-ejide azụ buru ibu.
Ka ọfịsa ahụ na-eru nso, na-eso ụzọ egwu ndị ịnyịnya ahụ gbalaga hapụrụ, ọ ga-agafe n'azụ iri abụọ ebe Robert nọ. N'ebe dị anya nke ahụ enweghị nsogbu. Onye uwe ojii ahụ bụ Lieutenant Pronghorn. O si La Granja rute, na-eme iwu ka ọ bịakwute ọmarịcha ahụ, mgbe ọ natachara ọkwa nke mwakpo ahụ na post dị n'okpuru. Ha agbaala n'okwukwe zuru oke, wee weghachite nzọụkwụ ha na akwa ahụ gbawara, gafere ọwa mmiri ahụ n'akụkụ dị elu wee gbadata n'ọhịa. Ynyịnya ndị ahụ nọ na ọsụsọ na nke na-agba agba, a ga-emerịrị ha.
Paris bụ nnọkọ oriri na ọ .ụ .ụ
Mgbe m tetara wee lee windo mepere emepe ma hụ ìhè ọnwa n'elu ụlọ nke ụlọ ndị toro ogologo, enwere mmetụta. Ezoro m ihu m na ndò, na-ezere ọnwa, mana enweghị m ike ihi ụra ma m nọgidere na-atụgharị mmetụta ahụ. Anyị abụọ tetere ugboro abụọ n’abalị ahụ, mana n’ikpeazụ nwunye m hiri ụra nke ọma, ya na ọnwa na-adị n’ihu ya. Achọrọ m ichebara ihe a nile echiche, ma o juru m anya. Nke ahụ mere ka ndụ dị m nro n'ụtụtụ ahụ, mgbe m tetara ma hụ isi iyi ụgha, wee nụ ọfụma ewu ahụ, wee pụọ ịzụrụ akwụkwọ akụkọ ịnyịnya.
Inwe na inwe
Bilie. Ọ bụ a mara mma doro anya n'ehihie, obi ụtọ, ọ bụghị oyi na a ìhè n'ebe ugwu ikuku na-afụ. Ebili mmiri na-apụ. N’akụkụ ọwa mmiri ahụ, e nwere pelikal abụọ nọ n’elu ikpo. Otu ụgbọ mmiri na-egbu egbu, nke a na-ese akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ọchịchịrị, gafere ahịa ahụ. Ọ nọdụrụ ọdụ n’osisi ahụ bụ onye ọkụ azụ ojii. N’elu mmiri ahụ, jiri ikuku na-akwọ mụrụmụrụ n’otu ụzọ ahụ ebili mmiri na-acha anụnụ anụnụ na-acha ntụ ntụ n’ehihie. Harry lere agwaetiti aja aja e guzobere anya mgbe ha gbara ọwa mmiri ebe achọpụtara ọtụtụ azụ azụ azụ. Anụ mmiri nke na-acha ọcha nke si n'oké osimiri na-efe n'àgwàetiti ahụ.
Ọ na-enweta ihe n'efu. Nke ahụ mere ka oge ịkwụsị akwụkwọ ọnụahịa ahụ. Mana ụdị ego ahụ na-akwụ mgbe niile. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ dị ebube ị ga-atụkwasị obi mgbe niile… Echere m na m akwụ ụgwọ maka ihe niile n'otu oge, na-enweghị echiche nke ihe nrite na ntaramahụhụ ahụ. Naanị mgbanwe nke ụkpụrụ. Otu nyere ihe ma onye ọzọ natara ihe nloghachi. Ma ọ bụ ọ rụrụ ọrụ maka ihe. N'otu uzo ma obu ozo, ikwesiri igha ugwo mgbe nile ihe obula nwere otutu uru ... Ma obu na ikwuru ugwo site na imuta ihe, ma obu site na nnomi, ma obu nara ihe egwu, ma obu were ego Iswa bụ ezigbo ebe ịga ahịa ...
Nọọsụ ahụ batara n'ime ụlọ ahụ mechie ụzọ. Anọ m ọdụ na paseeji. Adị m ka onye tọgbọ chakoo. Anaghị m eche echiche, enweghị m ike iche. Ama m na ọ ga-anwụ ma kpee m ekpere ka ọ ghara ịnwụ. Ekwela ka ọ nwụọ. Oh Chukwu m, ana m arịọ gị, ekwela ka ọ nwụọ. Aga m eme ihe masịrị gị ma ọ bụrụ na ị kweghị ka ọ nwụọ. Anam ariọ gi, ariọm gi, ariọm i. Chukwu m, ekwela ka onwuru ... Chi m, ekwela ka onwuru ... Ana m ario gi, anam ano, na aka gi. . Chukwu m, a na m ario gi, ekwekwala ka onwuru ... M g'eme ihe obula ichoro ma oburu na don't kweghi ka onwua ... Nwatakiri anwuola, mana ekwela ka onwu. I kwuru eziokwu, mana ekwela ka ọ nwụọ… Ana m arịọ gị, ana m arịọ gị, Chukwu m, ekwela ka ọ nwụọ… ».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ndị edemede » Ernest Hemingway. 119 afọ ọmụmụ ya. Iberibe ọrụ ya
Robert Burns. Afọ 222 na-enweghị onye edemede Scottish a ma ama. 4 poems